‘खरबपतिको नोकर बन्नु भन्दा आफ्नै देशमा एक रुपैयाँको मालिक बन्नु ठिक’
निसी खोला गाउँपालिका बाग्लुङका डिला रेग्मी र बेलबास १३ का गोविन्द घिमिरे विदेशबाट फर्केपछि देशमै उद्यम सुरु गरेका छन् । उनीहरूले लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका १० रुपन्देहीमा मायादेवि मन्दिरको नजिकै ५० लाख लगानीमा ‘लिस्नो होटल एण्ड लज’ खोलेर व्यवसाय सुरु गरेका छन् ।
रोजगारीका लागि सन् २०१० मा म्यानपावरमार्फत डिला रेग्मी युएई पुगेका थिए भने गोविन्द त्यो भन्दा अगाडि नै मलेसिया पुगेका थिए । युएई र मलेसियाबाट फर्केका उनीहरूले आफ्नै देशमा उद्यम सुरु गरेका हुन् ।
युएईमा रहँदा पत्रकारिता नेपाली एकता समाज युएईको महासचिव तथा अन्य सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध भएर सामाजिक काममा सक्रिय रहेका डिला रेग्मी सँग ऐक्यबद्धताले गरेको कुराकानी :
युएईमा कतिवर्ष बस्नु भयो, त्यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो ?
करिव ५ बर्ष बसियो । खास परदेशको अनुभव विशेष रहेन सामान्य नै रह्यो, सुरुदेखिनै सामाजिक संस्थाहरूमा आबद्ध भएर काम गरियो ।
के सोचले नेपाल फर्किनु भएको थियो ?
पैसा कमाएर खास सोंच बनाएर, यो गर्छु भन्न नपाउँदै परिवारिक समस्याका कारण अचानक युएई छाडेर आउनु पर्याे ।
अहिले रेष्टुरेण्ट व्यवसाय चलाउँदै हुनुहुन्छ सहजता र अप्ठ्यारा कस्ता छन्?
हजुर, भनाई र गराईमा आकाश धर्तिको फरक हुन्छ । हामी परदेशमा रहदा त्यहाँको अरुको अन्डरमा टाईम टु टाईम काम गर्नु पर्दा अनेकौ निराशाजनक भावनाहरू दिमागमा घुम्छन् । अनि फेरि सिस्टम आईडियाहरू देखेपछि केही आसाजनक कुराहरू खेल्छन अनि नेपालमै गएर केहि गर्नुपर्छ भन्ने भावना हर कोहिमा हुन्छ । तर, नेपालमा आई सक्दा त्यहाँको सोचाई र यहाँको वस्तुस्थिति मेल खाँदैन । अलि अलि कमाएको पैसा ऋण किस्ता ब्याजमा ठिक्कै हुन्छ अझ कोसेली बोक्न पर्नेहरूको लागि झन पिडादायी अवस्था हुन्छ । बाँकी लगानी जुटाउन मुस्किल हुन्छ । अर्काे बिदेशबाट फर्केर आउँदा नेपाली मार्केटको खास ज्ञान नहँुदा केही समस्या छ र हुन्छ नै । आशा छ, बिस्तारै सफलतातिर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
विदेशमा मजदुर बनेर काम गर्न सजिलो कि, देशमै मालिक बनेर ?
खरबपतिको नोकर हुनुभन्दा रुपैयाँको मालिक हुनु नै ठिक नी ! कानुनी, व्यवहारिक, मानवीय हरेक कोणबाट नजिक त आफ्नो देश हो । सामान्य गुजारा चलोस् बरु नेपालमै ठिक ।
तपार्ईको मात्रै लगानी छ कि अरु साथीहरू पनि हुनुहन्छ ? त्यहाँको रेष्टुरेण्ट र यहाँको रेष्टुरेण्टमा के फरक छ ?
फरक लगानी अनुसारको म्यानेजमेन्टमा अवश्य छ र हुन्छ । यहाँ र यहाँ सिस्टम, प्रविधि तथा ग्राहकमा फरक छ तर अन्य कुराहरू उस्तै उस्तै हो ।
तपार्ईँको रेष्टुरेण्टको विशेषता के हो ?
हाम्रो बिशेषता खासमा लुम्बिनी भ्रमण गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सस्तो मुल्यमा स्तरिय खाना, नास्ता र बासको ब्यबस्था गर्नुका साथै लुम्बिनिमा घुम्न चाहानेलाई घुमाउने र यहाँको बारेमा बुझाउने हो ।
विदेशमा कमाएको पैसा लगानी गर्नु भयो कि ऋण गरेर ?
खासमा पारीवारिक समस्याका कारण युएईबाट ईमरजेन्सी क्यान्सिल फर्किनुप¥यो । त्यतिबेला मसँग पैसा बचत थिएन । नेपालमै केहि गर्छु भन्ने चाहना चाहिँ थियो । केही समय पछि घर धितो राखेर ऋण खोजेर व्यवसाय सुरु गरेको छु । सम्भवत अब यहि नै जीवनभरको पेशा हुनेछ ।
विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई सरकारले सहुलियतमा ऋण दिने भनेको छ लिनु भएन ?
हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो सहुलियतका कुनैपनि ऋण लिइसकेका छैनौं ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई आफ्नै देश फर्काउन सरकारले के गर्नुपर्ला ?
पहिलो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम युवा लक्षित हुनुपर्याे । कृषि तथा पर्यटन व्यवसायमा आधुनीकिकरण गरेर युवाहरूलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउने वा लाग्न प्रोत्सान गर्नुपर्दछ । सरकारले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा ग्यारेन्टी तथा युवाहरूलाई रोजगारको ग्यारेन्टि गरिदिने हो भने कसलाई रहर लाग्छ होला र पराई देशमा अपमानित भैरहन ।
हामीहरूले बैदेशिक रोजगारलाई सजिलो बिकल्प ठानिरहेका छौँ, यसले हाम्रो सृजनशिलतामा गिरावट आएको छ केही निश्चित समय निश्चित धन आर्जन भएपनि बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कंदा नेपाली समाज परिवेश नयाँ भएको हुन्छ । आफूले प्राप्त गरेका कुराहरूमा सन्तुष्ट हुँदै स्वदेशमै संघर्ष गरे सफलता सुनिश्चित छ ।
पछिल्ला दिनमा राजनैतिक अवरुद्धता बढेको देखिन्छ यहाँले कस्तो अनुभुति गर्नु…
मुलुक समाजवादको यात्रामा रहेको भनिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा…
पुष्पलालको अस्तु ल्याउने भण्डारी भन्छन्– ‘मनमोहनजस्तो नेताबाट त्यस्तो होला भन्ने सोचेकै थिएनौँ’
सी जिनपिङको ‘धुलोपिठो’ अभिव्यक्ति संयोग मात्र होइन, अर्थयुक्त छ-नेकपा नेता,शुरेस कार्की